Traducción de significados Capítulo Sura Al-Shu'araa - Traducción ashanti - Enciclopedia del Sagrado Corán
Traducción de los significados del Sagrado Corán - Traducción ashanti * - Índice de traducciones
Traducción de significados Capítulo: Sura Al-Shu'araa
Versículo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Número de página: 367
1. Toaa – Siin -- Miim.
2. Woi yε Nsεm a efri Nwoma pefee no mu.
3. Ebia wo (de awerεhoͻ) bekum wo ho sε wͻ’nnyε agyidiefoͻ nti.
4. Sε Yε’pε a anka Yε’besiane nsεnkyerεnee bi fri soro aba wͻn so a εbεma wͻn kͻn aberε ase wͻ ahobraseε mu.
5. Afutusεm foforͻ biara a ebefri Ahummͻborͻ Hene no hͻ aba wͻn hͻ no gyesε wͻ’twi fa so.
6. Ampa sε wͻn apo (Asεm no); deε wͻ’dii ho fεw no ho asεm bεba wͻn so.
7. Anaasε wͻ’nhunuu nneεma papa ahodoͻ a Yε’ma no fifiri wͻ asaase no soͻ?
8. Nokorε sε, nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wͻn mu pii nye nni.
9. Nokorε sε wo Wura Nyankopͻn, Ɔne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
10. Kae εberε a wo Wura Nyankopͻn frεε Mose (ka kyerεε no) sε: “Kͻ amanfoͻ abͻneεfoͻ no hͻ, --
11. Farao nkorͻfoͻ no. Enti wͻ’nnsuro Nyame?”
12. Mose kaa sε: ”Me Wura, mesuro sε wͻ’bεbu me ͻtorofo “.
13. M’akoma nso sua, na mekεtrεma nso ntumi nkasa yie, enti soma Aaron (ma no ne me nkͻ),
14. Na (Farao ne nenkorͻfoͻ) wͻ (awudisεm ho) bͻne bi tia me, enti mesuro sε wͻ’beku me” .
15. (Nyankopͻn) kaa sε: ”Ɛmma saa da. Mo mmienu monfa Yε’nsεnkyerεnee nkͻ. Nokorε sε, Yε’ka moho, Yε’te“.
16. Enti mo mmienu monkͻ Farao hͻ na monka sε: “Nokorε, yε’yε Abͻdeε nyinaa Wura no asomafoͻ;
17. Na ma Israel mma no ne yεn nkͻ.
18. Farao kaa sε: “Ɛnyε yεn mu ha ara na yεtetee wo ԑberԑ a woyԑ akͻdaa? Ɛna wode wo mfie pii tenaa yεn mu ha?
19. Ɛna woyεε wo neyεε a woyͻeε, εna wo kͻkaa boniayεfoͻ no ho “.
20. (Mose) kaa sε: “Meyεε no wͻ εberε a na meka wͻn a wayera no ho “.
21. “Enti medwane frii mohͻ wͻ aberε a na mesuro mo; enti me Wura Nyankopͻn adom ama me adwen, εna Ɔde me aka asomafoͻ no ho “.
22. “Woi ne adom a wode adom me a wodeka m’anim sε wode Israel mma ayε nkoa? “
23. Farao kaa sε: ”Hwan ne Abͻdeε nyinaa Wura no?”
24. Mose kaa sε: (Ɔne) ͻsoro ne asaase ne deε εwͻ ne mmienu ntεm no Wura no, sε moadwen si mopi a.
25. Farao ka kyerεε wͻn a wͻ’atwa neho ahyia no sε: “Moante? “
26. Mose kaa sε: (Ɔne) mo Wura Nyankopͻn, ne moagyanom tetefoͻ no Wura Nyankopͻn no.
27. Farao kaa sε: “Nokorε sε mosomafoͻ no a yεsomaa no mo hͻ no abͻ dam paa “.
28. Mose kaa sε: “Apueε ne atͻeε ne deε εwͻ ne mmienu no ntεm no Wura Nyankopͻn no, sε mowͻ adwen ampa a”.
29. (Farao) kaa sε: ”(Mose), sε wofa nyame foforͻ bi ka meho a, ampa sε mede wo bεka wͻn a wͻ’da afiaseε no ho “.
30. Mose kaa sε: ”Nasε mede biribi pefee bi berε wo mpo a?”
31. Farao kaa sε: “Ɛneε fabra, sε woka nokorεfoͻ no ho ampa a”.
32. Enti Mose too nepoma no (too fᴐm) na hwε, ͻwͻ pefee bi nie.
33. Oyii nensa na hwε, na ayε fitaa dema obi a ohunu.
34. Farao ka kyerεε nhemfo a atwa neho ahyia no sε :”Nokorε sε, woi yε nkoyaayini a onim de.
35. Ɔpε sε ͻde nekonyaa no beyi mo fri moasaase no soͻ, enti deεn na morehyε, (anaasε modwen sεn)?”
36. Wͻ’kaa sε: “Ma ͻne ne nua no ntwεn, na soma dawubͻfoͻ ma wͻ’nkכ nkuro so.
37. Wᴐ’de nkoyaayifoͻ a wͻn aben paa na wͻ’nim de nyinaa bԑbrε wo”.
38. Enti nkoyaayifoͻ no behyiaa wͻ εda a wahyε a wͻ’nim no mu.
39. Wͻ’ka kyerεε amanfoͻ no sε: “Mo (nyinaa) moahyia?”
Número de página: 369
40. ”Sεdeε yεbedi (Farao) nkoyaayifoͻ no akyi sε εkͻba sε wͻ’di nkonim a”.
41. Enti εberε a nkoyaayifoͻ no baeε no, wͻ’ka kyerεε Farao sε: “Sε εkͻba sε yedi nkonim a yε’benya akatua bi anaa?”
42. Farao kaa sε: “Aane, εno deε na εyε nokorε sε mobεka wͻn a wͻ’bεn (me) no ho”.
43. Mose ka kyerεε wͻn sε: “Monto deε mobεtoͻ”.
44. Enti wͻ’too wͻn nhoma ne wͻn mpoma too fᴐm, na wͻ’kaa sε: “Farao tumi mu nti yεn na yεbedi nkonim!”
45. Enti Mose nso too ne poma no na hwε, εmemeneee wͻn atorͻsεm a w’abͻ wͻn trim ayε no (nyinaa).
46. Enti nkoyaayifoͻ no kͻͻ fͻm de wͻn anim butuu fͻm (maa Nyankopͻn);
47. Wͻ’kaa sε: “Y’agye abͻdeε nyinaa Wura Nyankopͻn no adi;
48. Mose ne Aaron Wura Nyankopͻn no.
49. (Farao) kaa sε: “Moadikan agye no adi aberε a menya maa mo ho kwan? Nokorε sε, (Mose) ne mo panin a ͻkyerεε mo nkoyaa yie! Mobehunu. Metwitwa monsa ne monan abͻ no abira, na m’abͻ monyinaa asennua mu“.
50. Nkoyaayifoͻ no kaa sε: “Ɛnsεe hwee! Nokorε sε ye’Wura Nyankopͻn hͻ na yεbεsan akͻ”.
51. Nokorε, yε’wͻ awerεhyem sε, ye’Wura Nyankopͻn de yεn mfomsoͻ bεkyε yεn sε yεn ne nnipa a wͻn adikan agye adie “.
52. Y’eyi kyerεε Mose sε: ”Fa Menkoa no tu kwan no anadwo, na nokorε sε (Farao ne nenkorͻfoͻ) beti mo”.
53. Enti Farao somaa dawubͻfoͻ kͻͻ nkuro no so-
54. Sε: ”Nokorε sε saa nkorͻfoͻ yi yε dͻm kakraa bi,
55. Nanso nokorε sε, wͻ’hyε yεn abufuo.
56. Nokorε sε yε’yε ɛdͻm a yεdͻͻso na y’ada yεn ho so.
57. Enti Ye’yii wͻn frii turo ne nsuo aniwa ho,
58. Ne ahonyadeε ne animuonyam gyina berε (biara) mu.
59. Saa ara, na Yε’maa Israel mma no bedii wͻn adeε.
60. Enti wͻ’tii wͻn wͻ εberε a na awia apue.
Número de página: 370
61. Ԑberε a εdͻm mmienu no hunuu wͻn ho no, Mose nkorͻfoͻ no kaa sε: “Nokorε sε, (Farao ne nedͻm yi) bεto yεn “.
62. Mose kaa sε: “Ɛmma saa da! Nokorε sε, Me Wura Nyankopͻn ka me ho, Ɔbεkyerε me kwan “
63. Enti Yeyi kyerεε Mose sε: “Fa wo poma no bͻ ͻpo no mu “. Na emu kyekyεe, na ne nkyekyεmu no mu biara bεyεε sε bepͻ kεseε bi.
64. Enti Yε’de ekuo baako no (Farao nkorͻfoͻ) no bεn saa bea hͻ.
65. Na Yε’gyee Mose ne wͻn a wͻ’ka neho no nyinaa nkwa.
66. Afei Yε’maa nsuo faa (ekuo) baako no.
67. Nokorε sε, nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wͻn mu dodoͻ no ara na wͻ’nnye nnie.
68. Nokorε sε wo Wura Nyankopͻn no Ɔne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Ahummͻborͻ Hene no.
69. Kenkan Abraham nso ho asεm no kyerε wͻn.
70. Ɛberε a ͻka kyerεε nepapa ne nenkorͻfoͻ no sε: “Ԑdeεn na moresom yi?”
71. Wͻ’kaa sε: “Yε’som abosom, na yε’bεkͻso de yεn ho ama wͻn”.
72. (Abraham) kaa sε: ”Enti sε mosufrε wͻn a wͻ’tie mo?”
73. Anaasε monya wͻn ho mfasoͻ anaasε ͻhaw bi?”
74. Wͻ’kaa sε: “Daabi, nanso yε’bεtoo y’agya nom sε saa ara na na wͻ’reyε”.
75. (Abraham) kaa sε: “ Enti moahunu deε mosom-
76. Mone moagya nom tetefoͻ no?
77. Nokorε sε, wͻ’yε m’atamfo, gyesε Abͻdeε nyinaa Wura Nyankopͻn no,
78. (Abͻdeε nyinaa Wura) no a Ɔbͻͻ me, Ɔno na ͻkyerε me kwan.
79. Ɔno na Ɔma me aduane die, na Ɔma me nsuo nom;
80. Sε meyare a Ɔno na Ɔsa me yadeε,
81. Ɔno na Ɔbεma me awuo na afei W’asan anyane me (afri owuo mu).
82. Ɔno na me wͻ anidaasoͻ sε Ɔde memfomsoͻ bεkyε me wͻ Akatua da no mu.
83. Me Wura Nyankopͻn, mame nyansa, adwen ne nteaseε, na fa me ka apapafoͻ no ho.
Número de página: 371
84. Na ma nkyirimma no mmͻ me din pa.
85. Na fa me ka wͻn a wͻ’bedi adeε wͻ anigyeε Aheman no mu no ho.
86. Na fa m’agya bͻne kyε no, nokorε sε ͻka ayerafoͻ no ho.
87. Na engu m’anim ase wͻ Wusͻreε da,
88. Ɛda no a sika anaa ahonyadeԑ ne mma ho mma mfasoͻ no,
89. Gyesε obia ͻde akoma pa, anaa akoma a emu teε bεba Nyankopͻn hͻ no,
90. Na yε’de Aheman no bεbεn Nyamesurofoͻ no,
91. Na yεbeyi Amanehunu gya no adi akyerε ayerafoͻ no -;
92. Yԑ’bԑka akyerε wͻn sε: “Deε na mosom no wͻ hen?
93. (Deε na mo) fri Nyankopͻn akyi (som wͻn no)? Wͻ’betumi aboa mo, anaasε wͻ’betumi aboa wͻn ara wͻn ho?”
94. Na yε’bεto wͻn (abosom) no ne ayerafoͻ no ama wͻ’de wͻn ti adikan akͻ (Ogya no) mu-
95. Ne ͻbonsam asafo no nyinaa.
96. Ɛberε a wͻ’bεko wͻ (Ogya no) mu no wͻ’bεka sε:
97. “Yε’dͻ Nyame sε, na yεwͻ ͻyera pefee mu;
98. Ɛberε a yεde mo totoo Abͻdeε nyinaa Wura no ho no.
99. Ɛnyε obi na ɔyeraa yɛn, na mmom abͻneεfoͻ no ara na wͻ’maa yε’yeraeε.
100. Enti seesei yenni otwitwagyefoͻ biara,
101. Anaa yͻnkoͻ brεboͻ.
102. Sε yεrenya kwan asan akͻ y’akyi (wͻ wiase) bio a, anka yεbεka agyidiefoͻ no ho.
103. Nokorε sε nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
104. Nokorε sε wo Wura Nyankopᴐn ne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Ahummͻborͻ Hene no.
105. Noa nkorͻfoɔ no annye asomafoͻ no anni
106. Ɛberε a wͻn nua Noa ka kyerεε wͻn sε: “Enti monnsuro Nyankopͻn na monnyε ahwεyie?
107. Nokorε sε meyε (Nyankopͻn) Somafoͻ nokwafoͻ ma mo.
108. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie ma me.
109. Memmisa (nsεmpa a mereka kyerε mo no) ho akatua, na mmom m’akatua deε εwͻ Abͻdeε nyinaa Wura Nyankopͻn no hͻ.
110. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie ma me.”
111. Wͻ’kaa sε: “Yεnye wo nni wͻ aberε a (nnipa mu) mpapahwekwa a wͻ’nni mmu na wͻ’di w’akyire?”
Número de página: 372
112. Noa kaa sε: “Ɛdeεn nimdeε na mewͻ wͻ deε wͻ’yε ho?
113. Wͻn akontabuo deε me Wura Nyankopͻn hͻ na εwͻ, sε monim ampa a.
114. Medeε (Menni ho tumi sε) mεpamo agyidiefoͻ no.
115. Medeε nokorε (m’adwuma) nesε, meyε kͻkͻbͻni pefee”.
116. Wͻ’kaa sε: “Noa, sε woanyae (wofrε no a) nokorε sε wobεka wͻn a yesi wͻn aboͻ (ku wͻn) no ho.
117. (Noa) kaa sε: “Me Wura Nyankopͻn, menkorͻfoͻ no abu me ͻtorofoᴐ.
118. Enti bu me ne wͻn ntεm atεn, na gye me ne agyidiefoͻ no a wͻ’ka meho no (fri abͻneεfoͻ no nsam.)”
119. Enti Yε’gyee no ne wͻn a wͻ’ka neho no nkwa wͻ nsuom hyεn a ayε mma no mu.
120. Afei Yε’maa nsuo faa nkaeε no.
121. Nokorε sε nsεnkyerεnee wɔ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
ᴐ122. Nokorε ampa sε, wo Wura Nyankopͻn, Ɔne Otumfoͻ a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
123. Aadfoͻ no annye asomafoͻ no anni.
124. Ɛberε a wͻn nua Huud ka kyerεε wͻn sε: “Adεn monnsuro Nyame?
125. Nokorε sε, meyε Ɔsomafoͻ nokwafoͻ ma mo.
126. Enti monsuro Nyame na monyε sotie ma me.
127. Memmisa mo (nsεmpa a mereka kyerε mo no) ho akatua, na mmom m’akatua deε εwͻ Abͻdeε nyinaa Wura no hͻ.
128. Mosisi adan akεseε wͻ mea mea a εhͻ korͻn wͻ akwan ho degye moani kwa (wͻ aberε a montena mu)?
129. Mosisi aban soroͻ a εyε fε nso ma moho tesε deε mobεtena mu afe bͻͻ.
130. Sε mosͻ (obi mu anaasε monsa ka obi a), mosͻ ne mu anaasε mone no di no wͻ atrimuͻden so.
131. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie mame.
132. Monsuro Nea Ɔde deε monim no adom mo.
133. Ɔde nyεmmoa ne mma adom mo,
134. Ne mfuo ne nsuo aniwa.
135. Nokorε sε, medeε mesuro Da kεseε no asotwee no ho asεm mamo”.
136. Wͻ’kaa sε: “Sε wotu yεn fo o, anaasε woanka afutufoͻ no ho o, εyε asεm korͻ ma yεn.
Número de página: 373
137. Woi deε εyε tetefoͻ no suban no bia,
138. Yε’nntwe yεn aso biara “.
139. Wͻ’buu no ͻtorofo, enti Yε’sεee wͻn. Nokorε sε nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
140. Nokorε ampa sε, wo Wura Nyankopͻn Ɔne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
141. Samuudfoͻ buu Asomafoͻ no atorofo;
142. Ɛberε a wͻn nua Soalhu ka kyerεε wͻn sε: “Adεn, monsuro Nyame?
143. Nokorε sε, meyε (Nyankopͻn) Somafoͻ nokwafoͻ dema mo.
144. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie ma me.
[145. Memmisa mo (nsεmpa a mereka kyerε mo no) ho akatua, mmom m’akatua deε εwͻ Abͻdeε nyinaa Wura no hͻ.
146. Enti (modwen sε) yebegyae mo wͻ abodweԑ mu wͻ deε mo wͻ mu wͻ εha yi ho?
147. Wͻ turo ne nsutire mu,
148. Ne mfudeε ne akyiresua a εso aba a agu nhyerεnee na abͻ esa-sa.
149. Modwa mmepͻ mu deyε afie a moadare mu (anaa mode tu moho).
150. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie mma me.
151. Na monhwε na moanni nsεmmͻnedifoͻ no ahyεdeε so,
152. Wͻn a wͻ’di nsεmmͻne wͻ asaase no soͻ na wͻ’nntoto ntotoeε pa no “.
153. Wͻ’kaa sε: “Woka wͻn a konya anya wͻn no ho.
154. Woyε nipa tesε yεn ara, enti fa nsεnkyerεnee bi bra, sε woka nokorεfoͻ no ho ampa a.”
155. (Soalhu) kaa sε: “Yoma bedeε bi nie, ͻwͻ ho kwan sε ͻnom (nsuo), ɛna monso mo wɔ ho kwan sε monom (nsuo) wͻ εda a yahyε (ama mo ne yoma no).
156. Monhwε yie na moanyε no bͻne biara, amma asotwee ammεsͻ momu da kεseε bi “.
157. Nanso wͻ’kum no, enti wͻ’benuu wͻn ho.
158. Enti asotwee no sͻͻ wͻn mu. Nokorε sε, nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
159. Nokorε sε, wo Wura Nyankopͻn ne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
Número de página: 374
160. Lut nkorͻfoͻ no buu asomafoͻ no atorofoᴐ.
161. Ɛberε a wͻn nua Lut ka kyerεε wͻn sε: “Adεn, monsuro Nyame?
162. Nokorε sε, meyε Ɔsomafoͻ nokwafoͻ ma mo.
163. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie mame.
64. Memmisa mo akatua (wͻ nsεmpa a mereka kyerε mo no) ho; mmom m’akatua deε εwͻ Abͻdeε nyinaa Wura no hͻ.
165. Abͻdeε no mu no mmarima ho na mokͻ?
166. Ɛna mogyae deε mo Wura Nyankopͻn abͻ ama mo a εyε moyere nom? Daabi, moyε amanfoͻ mmaratofoͻ paa“.
167. Wͻ’kaa sε: “Lut, sε w’anyae (wonsεm no ka a) wobεka wͻn a yapamo wͻn anaa yatu wͻn (afri y’asaase soͻ) no ho.
168. Ɔkaa sε: “Nokorε sε, mekyiri metan mo neyεε no.
169. Me Wura Nyankopͻn, gye me ne m’abusuafoͻ fri deε wͻ’reyε no mu “.
170. Enti Yε’gyee no ne n’abusuafoͻ nyinaa-
171. Gyesε (ne yere) aberewa no, ͻkaa wͻn a wͻ’kaa akyire no ho.
172. Afei Yε’sεee wͻn a aka no pasaa.
173. Yε’tͻͻͻ nsuo (a ԑyԑ asotwee) paa de guu wͻn so. Na εyε nsutͻ bͻne paa ma wͻn a yεbͻͻ wͻn kͻkͻ no.
174. Nokorε sε, nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
175. Nokorε sε wo Wura Nyankopͻn ne Otumfoͻ no a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
176. Na Aikatfoͻ no buu asomafoͻ no atorofoͻ.
177. Ɛberε a Shu’aib ka kyerεε wͻn sε: “Adεn, monsuro Nyame?
178. Nokorε sε, meyε Ɔsomafoͻ nokwafoͻ ma mo.
179. Enti monsuro Nyankopͻn na monyε sotie ma me.
180. Memmisa mo (nsεmpa a mereka kyerε mo no ho) akatua, mmom m’akatua deε εwͻ Abͻdeε nyinaa Wura no hͻ.
181. Monhyε (biribiara) ma no nyε mma, na monhwε yie na moammͻ (amanfoͻ) nyansa korͻno.
182. Monfa nsanea a εtenee na ensusu (adeε ma amanfoͻ).
183. Monhwε na moanfa nyansa (korͻno kwan so) ante amanfoͻ nneεma so (ansisi wͻn) amma nsεmmͻnee annkͻso wͻ asaase no so.
Número de página: 375
184. Na monsuro Nyankopͻn no a Ɔbͻͻ mo ne awoͻ ntotoasoͻ a edii kan no “.
185. Wͻ’kaa sε: ”Wodeε woka wͻn a konya anya wͻn no ho.
186. Woyε onipa tesε yεn ara, na yεn deε yε’dwene sε woka nkontompofoͻ no ho.
187. Enti sε woyε nokwafoͻ ampa a εneε ma ͻsoro no mu sini bi mmu megu yεn so“.
188. Ɔkaa sε: “Me Wura Nyankopͻn nim dwuma a modie no (nyinaa) “.
189. Wͻ’buu no ᴐtorofoᴐ, enti asotwee sͻͻ wͻn mu wͻ Enyunu da anaa Esum da bi mu. Nokorε sε na εyε asotwee kεseε Da.
190. Nokorε sε, nsεnkyerεnee wͻ woi mu, nanso wᴐn mu dodoͻ no ara nnye nni.
191. Wo Wura Nyankopͻn, Ɔne Otumfoͻ a Otumi ade nyinaa yε, Ɔne Mmͻborͻhunufoͻ Hene no.
192. Nokorε sε (Qur’aan yi) yε Adiyisεm a efri Abͻdeε nyinaa Wura no hͻ.
193. Honhom Nokwafoͻ no (Gabriel) na ͻde siane
194. baa w’akoma mu, sεdeε wobεka akͻkͻbͻfoͻ no ho,
195. Wͻ Arab kasa pefee no mu.
196. Nokorε sε, (Qur’aan yi, ne Nkͻmhyεni Muhammad ho asεm) wͻ Nyamesεm Nwoma a edii kan (Tawra ne Injeel) no mu.
197. Enti εnyε nsεnkyerεnee mma Quraishfoᴐ no sε Israel mu nwomanimfoͻ no nim yie (sε Qur’aan ho nkͻmhyε wͻ Tawra ne Injeel no mu)?
198. Sε Ye’sianee (Qur’aan yi) maa obi a ͻnnyε Arabni mpo–
199. Ɛna ͻrekenkan kyerε wͻn a, anka wͻ’nnye nni.
200. Saa ara na Yε’ma (gye a wͻ’nnye Qur’aan nnie) no wura abͻneεfoͻ no akoma mu.
201. Wͻ’nnye nni kͻpem sε wͻ’behunu asotwee yaaya no ansa.
202. Ɛbεba wͻn so mpofirem a wͻ’nnim ho hwee koraa.
203. Ԑhͻ na wͻ’bεka sε: ”Enti yεmma yεn ahomegye berε?”
204. Enti Ya’sotwee na wͻ’repε no ntεm no?
205. (Nkͻmhyεni), enti w’ahunu? Sε Yε’ma wͻn mfie tenten mpo a,
206. Deε yahyε wͻn ho bͻ no ba wͻn so a,
Número de página: 376
207. (Mfi tenten a wͻ’diiε) de gyee wͻn ani no ho mma mfasoͻ biara mma wͻn.
208. Ya’nsεe kuro bi gyesε (Yedi kan ma) wͻ’nya kͻkͻbͻfoͻ -
209. De afutusεm (brԑ wᴐn); na Yεn nyεε bͻne da.
210. Ԑnyε abonsamfoͻ na wͻ’sianee (Qur’aan) yi,
211. Na εmfata wͻn, na wͻ’ntumi mpo.
212. Nokorε sε yatwe wͻn afri (Qur’aan yi) ho kͻ akyirikyiri sε wͻ’bεtie mpo.
213. Enti hwε na w’ansu amfrε nyame foforͻ biara anka Nyankopͻn ho na wo ankͻka wͻn a yεbεtwe wͻn aso no ho.
214. Na bͻ w’abusuafoͻ no a wͻ’bεn (woͻ) no nso kͻkͻ.
215. Na berε w’ataban ase fama agyidiefoͻ no a wͻ’di wakyire no.
216. Nasε wͻ’antie wo a, ka sε: “Medeε m’atwe meho afri dwuma a modie no ho “.
217. Na fa woho to Otumfoͻ no a otumi ade nyinaa yε, Mmͻborͻhunufoͻ Hene no so;
218. (Otumfoͻ) no a Ohu wo wͻ εberε a w’asͻre agyina hͻ (rebͻ mpaeε anadwo),
219. Ne w’ahokeka wͻ wͻn a wͻ’de wͻn anim abutu fͻm (frε Nyame) no mu.
220. Nokorε sε, Ɔne Otiefoͻ no a Ɔte biribiara, na Ɔne Onimdefoͻ no.
221. Enti Menkyerε mo obia abonsamfoͻ siane ba nesoͻ?
222. Wͻ’siane ba onipa biara a ͻyε nkontomponi, bͻnefoͻ no so.
223. (Nipa bͻneni no a) ͻyε aso dema (ͻbonsam), na wͻn mu dodoͻ no ara yε nkontompofoͻ.
224. Na wᴐn a wᴐ’ka anwensԑm no deε ayerafoͻ no na wͻ’di wͻn akyi.
225. Wonhunuu sε wͻ’di akͻneaba wͻ bonhwa biara mu, (ka biribiara ho asεm, kamfo deε εyε ne deε εnyε nyinaa wͻ anwensԑm mu?)
226. Nokorԑ sԑ wͻ’ka deε wͻ’nnyε ho asεm.
227. Gyesε wͻn a wͻ’agye adie na wͻ’di dwuma pa, na wͻ’kaekae Nyankopͻn (wͻ εberε) biara (mu), na wͻ’bͻ wͻn ho ban wͻ akyire yi a yasisi wͻn. Na wͻn a wͻ’yε bͻne no behunu bea korͻ a wͻ’bεdane wͻn ho akͻ.
Traducción de los significados del Sagrado Corán - Traducción ashanti - Índice de traducciones
Traducción del significado del Noble Corán en Ashanti por Sheikh Haroun Ismaeel
1. Al-Faatiha - Sura Faatiha 2. Al-Baqara - Sura Al-Baqara 3. Al-Imraan - Sura Al-‘Imrán 4. An-Nisa - Sura Al-Nisaa 5. Al-Ma’idah - Sura Al-Maaida 6. Al-An’am - Sura Al-An'aam 7. Al-A’araf - Sura Al-A'raaf 8. Al–Anfal - Sura Al-Anfaal 9. At-Tauba - Sura Al-Tawba 10. Yunus - Sura Yunus 11. Huud - Sura Hud 12. Yusuf - Sura Yusef 13. Ar-Ra’d - Sura Ar-Ra'd 14. Ibrahim - Sura Ibrahim 15. Al-Hijir - Sura Hijr 16. An-Nahl - Sura Al-Nahl 17. Al-Israa - Sura Al-Israa 18. Al-Kahf - Sura Al-Kahf 19. Mar’yam - Sura Maryam 20. Toahaa - Sura Taa, Haa 21. Al-Anbiyaa - Sura Al-Anbiyaa 22. Al-Hajj - Sura Al-Hayy 23. Al-Muninuun - Sura Al-Muminoon 24. An-Nuur - Sura Al-Noor 25. Al-Fur’qaan - Sura Al-Furqaan 26. Ash-Shu’araa - Sura Al-Shu'araa 27. An-Naml - Sura Al-Naml 28. Al-Qasas - Sura Al-Qasas 29. Al-Ankabuut - Sura Al-'Ankaboot 30. Ar-Ruum - Sura Ar-Room 31. Lukman - Sura Luqman 32. As-Sajdah - Sura Sayda 33. Al-Ahzaab - Sura Al-Ahzaab 34. Sabai - Sura Saba 35. Faatir - Sura Faatir 36. Yasiin - Sura Yaseen 37. As-Soaafaat - Sura As-Saaffaat 38. Soaad - Sura Saad 39. Az-Zumar - Sura Az-Zumar 40. Gaafir - Sura Ghafir 41. Fussilat - Sura Fussilat 42. Ash-Shuraa - Sura Ash-Shura 43. Az-Zuhruf - Sura Az-Zukhruf 44. Ad-Dukhaan - Sura Ad-Dukhaan 45. Al-Jaathiya - Sura Al-Jaathiya 46. Al-Ahqaaf - Sura Al-Ahqaf 47. Muhammad - Sura Muhammad 48. Al-Fathi - Sura Al-Fath 49. Al-Hujuraat - Sura Al-Hujuraat 50. Qaaf - Sura Qaaf 51. Zaariyaat - Sura Adh-Dhaariyat 52. At-Tuur - Sura At-Tur 53. An-Najim - Sura An-Najm 54. Al-Qamar - Sura Al-Qamar 55. Ar-Rahmaan - Sura Ar-Rahmaan 56. Al-Waaqi’a - Sura Al-Waaqia 57. Al-Hadiid - Sura Al-Hadid 58. Al-Mujaadila - Sura Al-Muyaadila 59. Al-Hashr - Sura Al-Hashr 60. Al-Mumtahana - Sura Al-Mumtahana 61. As-Soaff - Sura As-Saff 62. Al-Jumu’a - Sura Al-Yumu'a 63. Al-Munaafiquun - Sura Al-Munaafiqoon 64. At-Tagaabun - Sura At-Taghaabun 65. At-Taoalaaq - Sura At-Talaaq 66. At-Tahriim - Sura At-Tharim 67. Al-Mulk - Sura Al-Mulk 68. Al-Qalam - Sura Al-Qalam 69. Al-Haaqa - Sura Al-Haaqqa 70. Al-Ma’aarij - Sura Al-Ma'aarij 71. Nuuh - Sura Nooh 72. Al-Jinn - Sura Al-Yinn 73. Al-Muzammil - Sura Al-Muzzammil 74. Al-Mudassir - Sura Al-Muddaththir 75. Al-Qiyaama - Sura Al-Qiyaama 76. Al-Insaan - Sura Al-Insaan 77. Al-Mursalaat - Sura Al-Mursalaa 78. An-Nabai - Sura An-Naba 79. An-Naazi’aat - Sura An-Naazi'aat 80. Abasa - Sura 'Abasa 81. At-Takwir - Sura At-Takwir 82. Al-Infitoaar - Sura Al-Infitaar 83. Al-Mutoaffinfiin - Sura Al-Mutaffifin 84. Al-Inshiqaaq - Sura Al-Inshiqaaq 85. Al-Buruuj - Sura Al-Burooj 86. At-Toaariq - Sura At-Taariq 87. Al-A’alaa - Sura Al-A'laa 88. Al-Ghaashiya - Sura Al-Ghaashiya 89. Al-Fajr - Sura Al-Fajr 90. Al-Balad - Sura Al-Balad 91. As-Shams - Sura Ash-Shams 92. Al-Lail - Sura Al-Lail 93. Ad-Duhaa - Sura Ad-Dhuhaa 94. Al-Insiraah - Sura Ash-Sharh 95. At-Tin - Sura At-Tin 96. Al-Alaq - Sura Al-Alaq 97. Al-Qadr - Sura Al-Qadr 98. Al-Bayyina - Sura Al-Bayyina 99. Az-Zilzaal - Sura Az-Zalzala 100. Al-Aadiyaat - Sura Al-'Aadiyaat 101. Al-Qaari’a - Sura Al-Qaari'a 102. At-Takaasur - Sura At-Takaathur 103. Al-Asr - Sura Al-'Asr 104. Al-Humaza - Sura Al-Humaza 105. Al-Fiil - Sura Al-Fil 106. Quraish - Sura Quraish 107. Al-Maa’uun - Sura Al-Maa'un 108. Al-Kawsar - Sura Al-Kawthar 109. Al-Kaafiruun - Sura Al-Kaafiroon 110. An-Nasr - Sura An-Nasr 111. Al-Masad - Sura Al-Masad 112. Al-Ikhlaas - Sura Al-Ikhlaas 113. Al-Falaq - Sura Al-Falaq 114. An-Naas - Sura Al-Nass
Lengua árabe- AL-Tafsir Al- Mu-iassar ( La Exégesis Facilitada) La lengua árabe- los significados de las palabras Traducción de inglés - Saheeh Internacional Lengua árabe - Al-Mujtasar para la Exégesis del Sagrado Corán Traducción al inglés -Taqi-ud-Din Al-Hilali y Mujsen Jan Traducción al Inglés - Centro Rowad - Juz Amma La traducción al inglés- Dr. Walid Blihech Al Umari La traducción inglesa- Dr. Arving الترجمة الإنجليزية - يعقوب Traducción al francés - Centro Internacional Noor La traducción al francés-Rachid Ma'ach Traducción francesa- Muhmmad Hamidullah La traducción inglesa del abreviado de la exégesis del Noble Corán Traducción Turca del Mujtasar para la exégesis del Sagrado Corán. Traducción francesa de Al-Mujtasar de la Exégesis del Sagrado Corán Traducción indonesia de Al-Mujtasar de la Exégesis del Sagrado Corán Traducción al vietnamita de Al-Mujtasar en la Exégesis del Sagrado Corán Traducción al bosnio de Al-Mujtasar de la Exégesis del Sagrado Corán Traducción al italiano de Al-Mujtasar de la Exégesis del Sagrado Corán La traducción rusa del abreviado de la exégesis del Noble Corán La traducción al español del abreviado de la exégesis del Noble Corán Traducción al filipino (tagalo) del Mujtasar para la Exégesis del Sagrado Corán Traducción bengalí de la "Explicación abreviada del Corán" Traducción persa de Al-Mujtasar para la Exégesis del Sagrado Corán. La traducción china para el abreviado de la exégesis del Noble Corán La traducción japonesa del abreviado de la exégesis del Noble Corán الترجمة الأسامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة المليبارية للمختصر في تفسير القرآن الكريم الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم Traducción al Español- Isa García Traducción al español - Centro Internacional Noor Traducción al español (América Latina) - Noor international Traducción Portuguesa- Helmy Nasr La Traducción al Alemán - Bubenjaim Traducción al alemán - Abu Reda Traducción al italiano- Uzman Ach-Cherif الترجمة البلغارية Traducción al rumano الترجمة الهولندية Traducción Turca - Shaaban Britsh Traducción al turco- Centro de Rowad At-Taryama Traducción Turca -Dr. Ali Ozek y otros Traducción Azerbaiyana- Ali Jan Mosaiv Traducción al georgiano Traducción al macedonio Traducción al Albanés- Hasan Nahi Traducción al albanés - Centro de traducción Rwwad (en proceso) Traducción al Bosnio - Mijanovich Traducción al Bosnio - Basim Korkot Traducción al bosnio - Centro de traducción Ruwwad Traducción al serbio - Centro de traducción Ruwwad (en proceso) Traducción Ucraniana- Dr. Mikhailo Yaqubovic Traducción Kazajo - Jalifa Altay Traducción al uzbeko- Muhammad Sadeq الترجمة الأوزبكية - مركز رواد الترجمة Traducción al uzbeko - Alauddin Mansur Traducción al tayiko- Aarifi Traducción al tayiko- Jawaja Mirov Jawaja Mir Traducción indonesia - Compañía Sabiq Traducción al indonesio - Ministerio de Asuntos Islámicos Traducción al indonesio- el Complejo Traducción al filipino (tagalo) Traducción al malayo - Abdullah Basamia Traducción China- Muhammad Makin Traducción uigur - Sh. Muhammad Saleh Traducción japonesa- Said Satu Traducción al coreano - Centro de traducción Ruwwad الترجمة الكورية - مركز رواد الترجمة Traducción al vietnamita - Centro de traducción Rwwad Traducción Vietnamita- Hasan Abdul-Karim Traducción Tailandesa Traducción Jemer Traducción persa- Centro Rowad At-Taryama الترجمة الفارسية - تفسير السعدي Traducción Dari Traducción al kurdo Traducción kurdo - Salahuddin الترجمة الكردية الكرمانجية Traducción al pashto Traducción al hebreo Traducción Urdu Traducción India Traducción bengalí- Abu Bakr Zakaria Traducción al maratiano Traducción Telugu- Abder-Rahim ibn Muhammad Traducción gujarati Traducción al Malayo - Abdul-Hamid Haidar Al-Madany y Kanhi Muhammad Traducción Assamese Traducción al tamil - Omar Sharif Traducción al tamil- Abdul Hamid Bakawi Traducción al cingalés Traducción Nepalí Traducción al suajili - Ali Muhsen Alberwany Traducción al idioma swahili- Abdullah Mohamad y Naser Jamis Traducción Somalí الترجمة الصومالية - يعقوب Traducción al amárico Traducción Yoruba Traducción al idioma hausa- Abu Bakr Jomy Traducción al Oromo Traducción al idioma luganda Traducción al mandingo - Diane Mohammed الترجمة الإنكو - بابا مامادي Traducción al kinyarwanda traducción dagbani Traducción al Chewa Traducción al Yau Traducción al fulani الترجمة اللينغالا
(Enviar observación: Traducción ashanti - Capítulo:Sura Al-Shu'araa - Versículo:)